Isahluko 96 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Abantu abaningi abakabazi futhi abacacelwa ngubuntu Bami. Sengikusho izikhathi eziningi, kodwa niselufifi futhi aniqondi okutheni. Kodwa lo ngumsebenzi Wami, futhi manje, ngalesi sikhathi, lowo owaziyo, uyazi, futhi lowo ongazi, angiphoqi. Kungaba yile ndlela kuphela. Ngikhulume ngokucacile futhi ngeke ngikusho kamuva (ngoba sengisho okuningi ngokwedlulele, futhi ngakusho ngokucace kakhulu. Lowo owazi Mina nakanjani unomsebenzi kaMoya oNgcwele futhi ngokungangabazeki ungomunye wamadodana Ami angamazibulo. Lowo ongangazi akayona nhlobo, okufakazela ukuthi sengiwuhoshile uMoya Wami kuye). Kodwa ekugcineni, ngiyokwenza wonke umuntu angazi—angazi ngokuphelele kokubili ebuntwini Bami nasebunkulunkulwini Bami. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami, futhi kufanele ngisebenze ngale ndlela. Lokhu futhi kuyisinqumo Sami sokuphatha. Wonke umuntu kufanele angibize ngoNkulunkulu wangempela okungukuphela Kwakhe, futhi angidumise aphinde angincome ngaphandle kokupheza.
Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I Isandulela Isahluko 1 Isahluko 29